IINGCAMANGO EZINGAMA-25 EZIPHOLILEYO ZABANTWANA ZEMOHAWK: EYONA NKWENKWE INCINCI I-MOHAWK HAIRCUTS (2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Abantwana abaPholileyo iMohawk
Ngaba ujonge i-mohawk yabantwana eya kujongeka ipholile kwinkwenkwe yakho encinci? Unamakhwenkwe amaninzi anika i-mohawk iinwele onokukhetha kuzo, kunokuba yinto ekhohlisayo ukukhetha kuyo yonke i…
Ngaba ujonge i-mohawk yabantwana eya kujongeka ipholile kwinkwenkwe yakho encinci? Ngamakhwenkwe amaninzi e-mohawk iinwele anokukhetha kuzo, kunokuba kukuchola ngobuqhetseba kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo ze-mohawks. Nokuba ufuna i-faux hawk (aka fohawk), mohawk fade, okanye mohawk enamacala achetyiweyo, kukho iindlela ezininzi ezimangalisayo ze-mohawk zokufumana lo nyaka. Ngethamsanqa, iinwele ze-mohawk zihamba kakuhle, zala maxesha, kwaye phantse zihlala zikhangeleka zilungile ebantwaneni.
Nazi ezona mbono zintle ze-mohawk zokuzama okwangoku. Ukusuka kufutshane ukuya kuthi ga ngoku, ezi ndlela zimbi zokwenza iinwele ze-mohawk zabantwana aziphelelwa lixesha. Ngamacala achetyiweyo okanye aphelileyo, wonke umntwana unokuzikhupha ezi ndlela zokucheba iinwele akukhathaleki nokuba ziluhlobo luni na lweenwele, kubandakanya iinwele ezingqindilili, ezibhityileyo, ezijijayo okanye ezigobileyo.
1Eyona ndawo iQhelekileyo yabantwana yeMohawk yokucheba iinwele
MbiniAmakhwenkwe amancinci apholileyo uMohawk
3Abantwana Iifeksi eziMfutshane eziFutshane + Ukuphela kweTaper
4Uhambo oluncinci uMohawk
5Inwele encinci iMohawk yokucheba iinwele
6Umntwana omncinci uMohawk ngeFade
7Inkwenkwana uMohawk enamacala achetyiweyo
8Ixesha elide Mohawk
9Epholileyo yaBantwana Faux Hawk
Shumi elinanyeAbantwana abaMnyama Mohawk
12Amakhwenkwe Faux Hawk
13Inkwenkwana uMohawk iphela
14Abantwana abapholileyo iMohawk kunye neeYilo ezisecaleni
Shumi elinantlanuAmakhwenkwe amade uMohawk + Amacala achetyiweyo
16Inkwenkwana emnyama eMnyama Mohawk iphela
17Long Spiked Mohawk + Amacala amafutshane kakhulu
18Amakhwenkwe amaCurly Mohawk
19Amakhwenkwe aTyhini aQhelekileyo eFahawk ayaphela
Amashumi amabiniInkwenkwana encinci iCurle Mohawk kunye neTaper Fade
amashumi amabini ananyeIsitayile sabantwana iFohawk
Eyona ndawo iQhelekileyo yabantwana yeMohawk yokucheba iinwele
I-mohawk ngokwesiko ibiyindlela evukelayo ye-punk. Nangona kunjalo, amakhwenkwe mohawk akhangeleka amnandi kwaye athandeka.
Njengenye ye amakhwenkwe amahle kunawo onke anokucheba iinwele , Olona hlobo luthandwayo lusikiweyo yi-mohawk fade, eza neenwele ezimfutshane kakhulu emacaleni nasemva eziwela ezantsi. Abantwana banokubuza abachebi beenwele zabo ukuba benze uyilo lweenwele okanye iinxalenye ezichetyiweyo ukuze zibukeke kakuhle.
Olunye uhlobo olusondeleyo kukuphambuka kwabantwana, apho iinwele zenkwenkwana yakho zitsaliwe zityhalelwa embindini wentloko. Iinwele ezi-spiky zinokufakwa ngokulula kwisitayile se-faux fade, ikama ngaphezulu, okanye iinwele ezirhuqwayo zangasemva, zenze ukuba kube lula ukwenza amakhwenkwe namakhwenkwe amancinci.
Jonga ezi zinwele zipholileyo zokucheba iinwele ze-mohawk ngezimvo kunye nokuphefumlelwa ngaphambi kotyelelo olulandelayo lomntwana wakho kwindawo yokucheba iinwele!
Amakhwenkwe amancinci apholileyo uMohawk
I-mohawk epholileyo yamakhwenkwe amancinci ibonelela ngesinwele esinefashoni kodwa eguqukayo nayiphi na inkwenkwe enokuyikhupha. Ngamacala achetyiweyo kunye neenwele ezimfutshane ezikrwiweyo, le nwele yanamhlanje ye-mohawk iyathandeka kwaye inesibindi. Sebenzisa i pomade eyomeleleyo okanye i-wax yeenwele ukugcina inkangeleko inesitayile imini yonke, okanye uyiguqule ibeyikama ngaphezulu, ubuye umva, okanye ujongeke ngendlela emdaka ukutshintsha isitayile.
Abantwana Iifeksi eziMfutshane eziFutshane + Ukuphela kweTaper
Inkwenkwe eyakhiwe ngamakhwenkwe isoloko ilukhetho oluhle kakhulu lwabantwana. I-taper ephezulu iphela ishiya iinwele ngaphezulu kwaye ngokuthe ngcembe iyasondela kufutshane nasezindlebeni nasentanyeni yentamo. Njengamacala amafutshane athandwayo, iinwele ezinde ezinde, ziinwele ezibonakalayo kwaye zeklasikhi ngenxa yendlela entsha, ecocekileyo. Ukudibanisa i-hawk efutshane kunye ne-fade yongeza umda omnandi kwinto enokuthi ibe yinwele yomntwana oqhelekileyo.
Uhambo oluncinci uMohawk
Ngaba ikhona into ebabazekayo kunosana oluncinci lwe-punk rock olunama-mohawk? Le mohawk encinci ixabisekileyo kulula kwaye kuyonwabisa ukunxiba. Iintsana zihlala zineenwele ezintle zosana, ke kuyakufuneka imveliso elungileyo yeenwele ukufezekisa olu hlobo. I-pomade eyomeleleyo esekwe emanzini okanye ijeli yosana iya kubonelela ngokubamba okufunekayo ukuze ihlale yonke imini ngaphandle kokucaphuka kolusu, kwaye isenokucoca ngokulula ebusuku.
Inwele encinci iMohawk yokucheba iinwele
I-mohawk yanamhlanje ayifuni macala achetywe ngokupheleleyo. Iintsana zinganyikimisa iintlobo zefashoni zeentlobo ze-mohawk apho iinwele ezingaphezulu zi-spiky kwaye amacala amafutshane nje kwaye athambile. Ukujonga uninzi loomama abafuni ukucheba iinwele ezithambileyo zomntwana, le iinwele ze-fohawk zinokuba zilungile.
Umntwana omncinci uMohawk ngeFade
Amakhwenkwe amancinci adume kakubi. Izinwele ezimfutshane nezicocekileyo ziluncedo ngokwenyani ukuba unomntwana okhutheleyo onokuthi abaleke izandla ezingcolileyo kunye neminwe ngeenwele zakhe. I-mohawk emfutshane enefade ishiya iinwele ezaneleyo zesitayile esinesibindi, ngokulula kweenwele ezimfutshane emacaleni.
Inkwenkwana uMohawk enamacala achetyiweyo
Ukuba unomntwana onomdla, i-mohawk enamacala achetyiweyo yindawo entle yokucheba amakhwenkwe ehlobo. Ziza kuhlala zilungile kwaye zipholile elangeni ngokusikwa kwazo okufutshane kakhulu. Inokuphinda iguqulwe ibe sisiqhelo senkwenkwe yamakhwenkwe esikolweni ngokucheba iinwele ezinde ngaphezulu. Abanye abafana abancinci banokufumana nje ukusikwa kwe-buzz ukuqala ngaphezulu.
Ixesha elide Mohawk
itshathi yeentlungu ze tattoo indoda
Lo ngumzekelo weyona nkwenkwe yakudala i-mohawk yeenwele. Kukho ii-pomades ezikalwe phezulu, iigels, kunye neenwele ezomeleleyo ngokwaneleyo ukugcina nokuba i-mohawk ende ibambe ubuninzi bevolumu, ukuphakama, kunye nokuhamba. Ingcebiso yebhonasi: ungcikivane iinwele zomntwana wakho entlokweni ukongeza ubume kunye nokuphakama ukuze ujongeke ngokupheleleyo.
Epholileyo yaBantwana Faux Hawk
Ukuba umntwana wakho ufuna isitayile esithile esinobuganga, kodwa awukulungelanga ukuba abe ne-mohawk, iinwele ze-faux hawk zezona zinto zibalulekileyo. Buza umchebi wakhe ukuba anqumle amacala kunye nomva nge-clippers usebenzisa inombolo yesi-2 okanye yesi-3, kodwa ushiye malunga nee-intshi ezimbini ngaphezulu. Sebenzisa ijeli okanye imousse kwisitayile.
Nabantwana abaneenwele ezimfutshane banokuyonwabela i-mohawk. Cheba okanye ucime amacala ukubonelela ngokwahlukileyo kubude obushiyekileyo ngaphezulu, kwaye ugxininise ukuba iinwele ezimfutshane ze-mohawk ngokufaka imveliso elungileyo yesitayile. Sebenzisa ijeli okanye ipomade ukugqiba okukhazimlayo, okanye i-wax yokongeza ubume bendalo. Yigqibe nge-hairspray kuyo yonke imini.
Abantwana abaMnyama Mohawk
Ama-mohawks apholileyo abantwana abamnyama beza ngazo zonke iimilo kunye nobukhulu. Eyaziwa nangokuthi kukuqhekeka kokuphela kwe-mohawk, fumana i-barber ukuba icime amacala kwaye ushiye ubude obongezelelekileyo kwizinwele ezimnyama ezingaphezulu. Ngeenwele ezigotyiweyo ezinokubhalwa ngendlela ejijekileyo okanye iAfro, ii-mohawks zamakhwenkwe amnyama ziyathandeka, zintle kwaye mhle.
Amakhwenkwe Faux Hawk
Ngaba ufuna ukongeza umda omncinci kumakhwenkwe? Yongeza umbala wombala. Ukuphawula umbala onesibindi, odlamkileyo owukhethileyo kwezona ngcebiso zeenwele kwenza isitayile sibonakale. Ngaba awulungelanga ukuzibophelela ngombala ngokusisigxina? Sebenzisa itshokho yeenwele okanye ukutshiza kwethutyana okuhlamba ngeshampu.
Inkwenkwana uMohawk iphela
Oku kugqabhuka kokuphela kwe-mohawk yamakhwenkwe amancinci ngumzekelo ogqibeleleyo wenguqulo engagqithisi kakhulu enesitayile esibunjiweyo. Ukuqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqhaqa kwaye kwehla entanyeni. Isitayile samakhwenkwe aneenwele ezishinyeneyo, sebenzisa i-matte pomade yokugqiba kwendalo ecocekileyo kunye neklasikhi. Zininzi iintlobo ze amakhwenkwe aphela iinwele ukukhetha, jonga amathuba.
Abantwana abapholileyo iMohawk kunye neeYilo ezisecaleni
Yongeza isitayile sangoku kubantwana abapholileyo i-mohawk ngokudibanisa uyilo lweenwele. Buza i-barber yakho ngamacala aphelileyo-ukuqala phezulu, ezantsi okanye embindini- kwaye ufumane uyilo oluchetyiweyo entlokweni yakho. Iinkwenkwezi, imigca, ii-zig zags, kunye nokunye ukusika okuyilayo kunokwenza i-mohawk ibe yodwa kwaye intsha.
Amakhwenkwe amade uMohawk + Amacala achetyiweyo
Kubafana abathanda ukutshintsha isitayile sabo imihla ngemihla, i-mohawk ende enamacala achetyiweyo inokumangalisa ngeendlela ezahlukeneyo. Ukushiya ubude obuninzi ngaphezulu kunye nokusebenzisa isimbo sokuthambisa okanye i-wax kunokukunika inkululeko yokujonga iindlela ezahlukeneyo ze-mohawk kunye neentlobo. Kwaye ukuba umntwana wakho ufuna ukutshintsha inkangeleko yakhe, inokubhalwa kwisitayile se-pompadour, ukubuyela umva, ukudibanisa ngaphezulu, okanye iinwele zomphetho.
Inkwenkwana emnyama eMnyama Mohawk iphela
Ngeenwele ezinesitayile esingathintelekiyo, musa ukoyika ukudibanisa iintsingiselo zeenwele. Izinwele zendalo zihamba ngeenwele ezimnyama ngoku kuba azifuni unyango olonakalisayo okanye iimveliso zesitayile. Fumana i-fade entsha kwaye vumela iinwele zakho ezimnyama zendalo ziphakamise kwi-mohawk. Yongeza kuyilo oluchetyiweyo ekuphelisweni kwento ye-chic.
Long Spiked Mohawk + Amacala amafutshane kakhulu
I-Mohawks yindlela entle yasehlotyeni yamakhwenkwe. Amacala amafutshane enza ukuba kugcinwe ukugcinwa okuphantsi kakhulu, kwaye iipiks ezide zilunge ngokugqibeleleyo kubantwana abaqhuba endle ngeentsuku zehlobo. Gcina imali yakho kwimveliso yokuthambisa iinwele ukuze ugcine isitayile sikwindawo.
Amakhwenkwe amaCurly Mohawk
Xa abantu bejonga ii-mohawks, bahlala becinga nge-punk ye-1980 yabantwana abanespiksi senkululeko. Kodwa akudingeki ukuba ube neenwele ezithe tye ukugubha ukujonga. Iinwele ezijijekileyo zihlala zikwanele ukuphakamisa ukwenza i-mohawk yendalo xa idityaniswe ngamacala aphelileyo. Ukwenza i-mohawk yeenwele ezigobileyo, fumana iimveliso eziyilelwe ukuphucula ii-curls kwaye zinike ukubamba okuninzi ukugcina isimbo kunye nokuphakama.
Amakhwenkwe aTyhini aQhelekileyo eFahawk ayaphela
Ukulungiselela, ukuthatha okwangoku kwi-mohawk, soloko ufumana i-taper fade. Ngelixa i-bald fade isika iinwele phantsi kolusu, i-taper iya kufutshane kwaye ifutshane kodwa ishiye ubude. Umahluko kukuba omnye akavezi isikhumba sasentloko. Kule ndlela, shiya iinwele eziphakathi ubude ngaphezulu, emva koko uvumele iinwele ukuba zihlale ixesha elide ngaphambili.
Inkwenkwana encinci iCurle Mohawk kunye neTaper Fade
Ekhethekile kwaye inemfashini, le mohawk egobileyo yamakhwenkwe isikwe ngokugqibeleleyo kwaye inesitayile. Yenza lula kwi-mohawk nge-taper haircut emacaleni nasemva. Ngokungafaniyo nokuphela, i-taper ibonelela ngobude obude. Sebenzisa i-mousse ukulawula iinwele ezinde ezigobileyo ngaphezulu ngelixa uzinika ubungakanani kunye nevolumu. Abanye abantu banokucinga ukuba abantwana abancinci abaneenwele ezigobileyo abakwazi ukukhupha iinwele, lo mzekelo ubonakalisa indlela iintlobo ezahlukeneyo zeenwele ezinokukhulisa ngayo ukubonakala.
Isitayile sabantwana iFohawk
Nokuba iinwele zeklasikhi zeklasikhi zinokufakwa kwisitayile kwi-fohawk. Nawuphi na umfana omncinci onenwele ezimfutshane emacaleni aneenwele eziphakathi ukuya kwezide ngaphezulu unokukrola ngokulula i-faux hawk. Ngejeli encinci, ipomade, kunye neenwele ezihlala ixesha elide, amakhwenkwe kunye nabantwana abancinci banokufumana sonke isitayile ngaphandle kokuzibophelela.
i-sleeve tattoos yamadoda
iplatinam blonde iinwele amadoda
amakhwenkwe amancinane acheba iinwele
bala itshathi yokuvumisa ngeenkwenkwezi